उपत्यकामा संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै के होला त लकडाउन खुकुलो ? « Niatra TV
उपत्यकामा संक्रमितको सङ्ख्या घट्दै के होला त लकडाउन खुकुलो ?
काठमाण्डौं,जेठ १७ । अहिले उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै राजधानीमा कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको मुख्य सरकारी अस्पतालमा शैया खाली हुन थालेको छ । टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन सहितका शैया तथा आइसीयू पनि खाली भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डा.रामविक्रम अधिकारीका अनुसार विगत तीन दिनदेखि अस्पतालको आकश्मिक कक्षामा आएका कुनै विरामी फिर्ता पनि नगरिएको र भर्नाका लागि नपर्खाइएको बताए ।